2015 - ISP Myanmar China Desk
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - China-Myanmar Relations Since Naypyidaw’s Political Transition: How Beijing Can Balance Short-Term Interests And Long-Term Values
ရေးသားသူ - Chenyang Li နှင့် James Char
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - Nanyang Technological University
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် - ၂၀၁၅၊ မတ်
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရပ်သားပုံပြောင်းတပ်မတော်အစိုးရကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှုများအကြောင်း ဆွေးနွေးရာတွင် လေ့လာသုံးသပ်သူအများစုသည် ဘေဂျင်းနှင့် နေပြည်တော်ကြား ဆက်ဆံရေးကျဆင်းလာမှုကို Read more...
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - China’s Myanmar Policy: Dilemma or Strategic Ambiguity?
ရေးသားသူ - Bernt Berger
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - Institute for Security and Development Policy
စာတမ်းခေါင်းစဉ် – China’s Myanmar Policy: Dilemma or Strategic Ambiguity ရေးသားသူ – Bernt Berger ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ – Institute for Security and Development Policy ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် – ၂၀၁၅၊ မတ် စာတမ်းအပြည့်အစုံ – China’s Myanmar Policy: Dilemma or Strategic Ambiguity စာတမ်းအကျဉ်းချုပ် မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားပဋိပက္ခများနှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား တိုက်ရိုက်ရော၊ သွယ်ဝိုက်၍ပါ ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုများရှိသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်ရှိတိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်လျက်ရှိသော တရုတ်မျိုးနွယ်ဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအား မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ဆိုသည်မှာ တရုတ်နိုင်ငံအတွက် အကျပ်တွေ့စရာ Read more...
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - Myanmar’s China Policy since 2011: Determinants and Directions
ရေးသားသူ - Maung Aung Myoe
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - Journal of Current Southeast Asian Affairs
ထုတ်ဝေသည့်ခုနှစ် - ၂၀၁၅
ယခုစာတမ်း၏ အဆိုပြုချက်သည် ၂၀၁၁ နှစ်မှစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်အပေါ် မူဝါဒပုံစံအသစ်နှင့် ချဉ်းကပ်လာစေသည့် အဓိကတွန်းအားတစ်ခုမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် ပြန်လည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည်။ ယင်းချဉ်းကပ်မှု အောင်မြင်ရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်တို့အကြား ဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်မှုအပေါ်တွင် Read more...
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - Myanmar’s foreign policy towards China 1988-2012: To what extent has Myanmar’s foreign policy towards China been determined by global geopolitical concerns in the period 1988-2012?
ရေးသားသူ - Amanda Fang
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - The Harvard Undergraduate Research Journal
ယခုစာတမ်းတွင် ၁၉၈၈-၂၀၁၂ အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်ချမှတ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒမှာ ပထဝီနိုင်ငံရေး သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအပေါ် အခြေခံပြီး စဉ်းစားဆုံးဖြတ်သလားဟူ၍ မေးခွန်းထုတ်ထားသည်။ ပထမဦးစွာ ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုများမပြုမီ ၁၉၈၈-၂၀၁၂ ကာလအတွင်း တရုတ်-မြန်မာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ်ထားသည်။ အဓိကဆွေးနွေးချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒသည် နိုင်ငံတကာပထဝီနိုင်ငံရေးကို အလေးထားသည်။ Read more...
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - A Multi-level Analysis of Sino-Myanmar Relations amidst Political Changes in Myanmar
ရေးသားသူ - Bill Chou
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - Department of Government and Public Administration, University of Macau
ယခုစာတမ်းတွင် တရုတ်နှင့် မြန်မာအကြား ဆက်ဆံရေးကို အလွှာစုံ အုပ်ချုပ်ရေးဆန်းစစ်ယူဆနည်းအား အသုံးပြုထားသည်။ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး အရွေ့အား ဒေသန္တရအဆင့်၊ နိုင်ငံတော်အဆင့်နှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအဆင့်တို့ဖြင့် လေ့လာထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အားနည်းချက်မှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကိစ္စရပ်များအား ကိုင်တွယ်ရာတွင် သေချာဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ Read more...
စာတမ်းခေါင်းစဉ် - China-Myanmar Cooperation to Combat Illegal Timber Trade and Promote Sustainable Forestry Investment
ရေးသားသူ - REN Peng နှင့် JI Lin
ထုတ်ဝေသည့်အဖွဲ့ - Global Environmental Institute
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း သစ်တောပြုန်းတီးမှု၏ ၁၅% မှာ တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တွင် တရားမဝင်သစ်ကုန်သွယ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနက သစ်အကြမ်းထည်အလုံးလိုက် တရားမဝင်တင်ပို့မှုကို တားမြစ်ချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း ထိရောက်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ရန်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အထောက်အပံ့လိုအပ်သည်။ Read more...